ညို ညို – Hlataw.com
“ အား……အား….နာတယ်…..နာတယ်…အိုး…….အား……အား……. ” ကြားလိုက် ရသော အသံကြောင့် မောင်ကျော်ခြေလှမ်းများ ရပ်သွားသည်။ အင်္ကျီချွတ်နှင့်ကျော ပေးထားသော ဦးအေးမောင်ကို နောက်ဖက်ကတွေ့လိုက်ရသည်။ အသံကြား လိုက်ရသော အခန်းတံခါးဝသို့ မောင်ကျော်ပြေးကပ် ၍ကြည့်လိုက်သည်။ “ အား…….အား…….အရမ်းနာတာဘဲ……ကျွတ်…..ကျွတ်.. ” ဖြူဖွေးနုနယ်သော လက်လေးတစ်ဖက်က ဦးအေးမောင်၏ ကျောပြင်ကြီးကို ဖက်၍ထားသည်။
“ အိုး……အိုး…..အလာလား….အဲ့ဒါ အရမှးထိတာဘဲ…….အ….အ.. ” အခန်းထဲတွင် ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်ထားသောကြောင့် အလင်းရောင်က အားနည်းနေသည့် အပြင် အခန်း တံခါးဝတွင်လည်း ကန့်လန့်ကာလေးက ရှိနေသေးသည်။ မောင်ကျော် ကန့်လန့်ကာလေးကို အသာလေးဖယ်၍ အခန်းထဲသို့ကြည့်လိုက်သည်။ “ဗြွတ်…… ပြွတ်……ပလွတ်….စွပ်….စွပ် ” ဖင်ပြောင်ကြီးကို အားနှင့်မြှောက်ကာဆောင့်နေသည်။
ကြီးမားမဲနက်သော လီးကြီးကဖြူဖွေးနီရဲလျှက် ပြဲအာနေသော စောက်ပတ်လေးထဲ ပြည့်ပြည့်ကြီး ဝင်နေသည်။ စောက်ပတ်ဘေးသားလေးများက နီရဲကာ ပြည့်တင်းတင်း ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေသည်။ အခန်းတံခါးဘက်သို့ ကျောပေးထားသဖြင့် ထောင်ထားသော ဒူးလေးနှစ်ချောင်း ဖြဲကားလိုက်တိုင်း ဖိဝင်လိုးသွင်းနေသောလီးကြီး အဝင်အထွက်ကို မောင်ကျော်ရှင်းလင်းစွာ မြင်နေရသည်။ “ တော်…..တော်ပြီ ဦးလေးရယ်….နာတယ်……. ” “ ခဏလေးပါ ညိုညိုရယ်….. ဦးလေးပြီးကာနီးပါပြီ……. ” “ ပြွတ်…..ပြွတ်…..စွပ်……စွပ်…..အ….အ….အီး…..အီး… ” ညိူညိုတဲ့…..ဒါ….ဒါ….လှသန်းညီမလေး…..ဟာ…..ရက်စက်လိုက်တာ……နှမြောဖို့ကောင်းလိုက်တာ….. ညိုညိုက ဘာလို့ရောက်လာတာလဲ……အရင်ထဲကဖြစ်နေပုံတော့ မဟုတ်ဘူး……..။ မောင်ကျော် ရင်ထဲတွင် ဗလောင်ဆူသွားသည်။
မနေ့ကပင် မောင်ကျော် ညိုညိုကိုကြည့်ပြီး ချစ်စိတ်တွေ ဝင်လာမိခဲ့သေးသည်။ အခုတော့ ကန်ထရိုက်ဦးအေးမောင်၏ ဆေးထိုးထားသော လီးကြီးက ညိုညို၏ နုဖတ်ဖြူဖွေးသော စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ပက်ပက်စက်စက်ဖြဲနေပြီ။ “ တော်ပြီ….. တော်ပြီ…. ပိုက်ဆံမချေးချင်လဲနေ….. ပိုက်ဆံလိုက်ယူဆိုပြီး အခန်းထဲခေါ်လာပြီးတော့ အတင်းလုပ်တယ်…. အင်း….. အီး…. အီ…… ” ညိုညိုစကားကြောင့် မောင်ကျော်ဇာတ်ရည်တစ်ဝက်လောက် လည်သွားပြီဖြစ်သည်။ “ ဗြွတ်….. ပြွတ်….စွပ်….စွပ်….. ပြွတ်.. ” “ အား….အား….အမလေး…..ကျမ…….မခံနိုင်တော့ဘူး……လွှတ်ပါတော့….အားး……အားး……. ” ညိုညို ငိုလဲငို အတင်းလဲရုန်းနေသည်။ “ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ……ညိုညိုရာ… ” “ ပြွတ်… ဗြစ်… စွပ်… စွပ်… အား…. အမလေး… အား…. အား…. လွှတ်ပါဆို… ဘုန်း…. ဘုန်း…. ” ညိုညို ရုန်းလဲရုန်း ဒေါသတကြီးဖြင့် မွေ့ယာကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထုသည်။
ညိုညို အပြင်းအထန် ရုန်းကန်နေသောကြောင့် ဦးအေးမောင် အရသာပျက်သွားသည်။ “ ဟာ…..ဒီကောင်မလေး…..နင် စိန်ကျော်နဲ့ခံတုန်းက ဒီလိုဘဲလား…… ” “ ဘာ….ဘာ…. သူက သေးသေးလေးရှင့်… ရှင့်လို အကြီးကြီး မဟုတ်ဘူး….. ” ညိုညို ဒေါသစိတ်ဖြင့် လိမ်ညာဖုန်းကွယ်ရမည့် ကိစ္စကိုဖွင့်ဟ မြည်တွန်လိုက်သည်။ ဟာ စိန်ကျော်နဲ့ခံဘူး တယ်တဲ့ သူ့ရည်းစားတဲ့၊ ဟွန်း ငါနဲ့တော့ကွာပါ့ ငါ့ရည်းစား မမချိုကို အခုထိလုပ်လို့ မရသေးဘူး ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် ရအောင်ချမယ်ဟု မောင်ကျော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည်။ ဦးအေးမောင်က ညိုညို၏ နို့ကြီးတွေကို စုံကိုပြီးတအား ဆောင့်နေသည်။ ညိုညို မခံမရပ်နိုင် ရုန်းကန်လေ ဆောင့်ချလေပင်ဖြစ်သည်။
“ အီး…..ဟီး….ဟီး……အမလေး……နာလိုက်တာ……အမလေး…..လေး…. ” “ မငိုပါနဲ့ ညိုညိုရယ်….ကောင်းလာမှာပါ…… ” “ ပြွတ်… ပြွတ်…စွပ်…စွပ်…ပလွတ်….ဗြွတ်….ပြွတ်…´´ “အား…အား…..နာလွန်းလို့ပါရှင်…..တော်ပါတော့…..အ…..အ….´´ စောစောက ဦးအေးမောင်ကို ဖက်တွယ်ထားသော ညိုညို၏လက်ကလေးများက ဦးအေးမောင်ရင်ဘတ်ကို စုံကန်တွန်းထားသည်။ ညိုညို၏ စကားအဆုံးမှာပင် ဦးအေးမောင်က ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် ညိုညို၏နှုတ်ခမ်းလေးများကို ဖမ်ယူ၍ ငုံစုပ်လိုက်သည်။ ညိုညို၏ မျက်တောင်ကော့ကြီးများစင်းကာ ငြိမ်ကျသွားပြီး ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ကို ထောက်ကာ ဖင်ကြီးကိုဆတ်ကနဲ ကော့ပြစ်လိုက်သည်။
ဦးအေးမောင်က အဆက်မပြတ်ဆောင့်နေသော်လည်း ညိုညိုကဖင်ကြီးကိုပြန်မချ။ ကော့တင်မြဲ ကော့တင် ထားတော့ ဦးအေးမောင်က မြိန်ရေယှက်ရေဖြစ်နေသည်။ “ ပြွတ်…..စွပ်….. ပြွတ်…..ဖွတ်…. ပြွတ်….. ” “ ဘုန်း……….. ” “ ဟင်း….အသံတွေက အရမ်းထွက်တာဘဲ……အဟင့်.. ” ဖင်ကြီးကိုအိပ်ယာပေါ်ပြစ်ချရင်း ညိုညိုပြောသည်။ ကျွတ်ထွက်သွားသော နှုတ်ခမ်းကို ဦးအေးမောင်က လိုက်ဖမ်း၍ ဒုတိယအကြိမ်စုပ်လိုက်ပြန်သည်။ ထိုအခါ ညိုညို၏ခါးလေး ကော့တက်အလာ ဦးအေးမောင်က ကော့တက်လာသော ခါးလေးကို ဆွဲဆွဲပြီးမနားတမ်းဆောင့်လိုးနေသည်။ ညိုညို အာခေါင်တွေပူခြောက်လာပြီး သူမ၏ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးများကဦးအေးမောင်၏ဆောင့်အားကြောင့် နိမ့်ဆင်းသွားလိုက် ပြန်ကော့တက်လာလိုက်ဖြစ်နေသည်။
“ သိပ်ကောင်းတာပဲ ညိုညိုရယ်…… ညိုညိုက အပေးသိပ်ကောင်းတာဘဲ……. ” “ ဘာ…..ဘာ….ကောင်းတာလဲ ” “ ပြွတ်…. ပြွတ်…..စွပ်…..စွပ်… ပြွတ်…. ပြွတ်… ” “ လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးတာတို့ ဖင်ကြီးကော့ကော့ပေးတာတို့…… ” “ အာ…ဦးကလဲ….အင်…ဟင့်…..ဟင့်… ” “ ဦးပြီးတော့မယ်….တအားဆောင့်မယ်နော်…. ” “ အင်း…..အင်း…..ဆောင့်….ဆောင့်…..ဆောင့်သာဆောင့်…..အင်း……အင်း…. ” နာလှချည်ရဲ့ဆို၍ ရုန်းကန်ငြင်းဆန်နေသော ညိုညိုက ဦးအေးမောင်၏ ခါးကိုဆွဲဖက်ကာ အောက်မှကော့ပင့် ၍ ပြန်ဆောင့်နေလေပြီ။ “ ပြွတ်… ပြွတ်… စွပ်… စွပ်…. ပြွတ်… ပြွတ်… အ… အီး…. ဆောင့်…. ဦး… ညိုညို ကောင်းလာပြီ ” တွေ့မြင်ကြားသိ နေရသော မောင်ကျော်တစ်ယောက်ကတော့ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်း ခုန်ကာ အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။
“ ပြွတ်… ပြွတ်… စွပ်… စွပ်… ပြွတ်… ပြွတ်… အင်း… အင်း… အမလေး… ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်…… အာ့… အာ့… အင်း… ” “ ညိုညို့ကို ဦးအမြဲလိုးမယ်နော်…. ” “ ရတယ်…..လိုး…..လိုး….ညိုညိုလာခံမယ်…….အား…..အ….လုပ်…လုပ်….ဆောင့်စမ်းပါဆို…. ” “ အင်း… ပြွတ်… ပြွတ်… ဒုတ်… စွပ်… စွပ်… ပလွတ်… ပြွတ်… ပြွတ်… အား… အမလေး… အား…. အား…. ညို… ညို… အီး… ” လီးကြီးကို အတင်းဆောင့်ထည့်ရင်း ဦးအေးမောင်ခါးကြီးတွန့်ကနဲတွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသလို ညိုညိုကလည်း တစ်ကိုယ်လုံး တောင့်သွားကာ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့လျှက် ထောင်ထားသော သူမ၏ ဒူးလေးနှစ်ဖက်ခါရမ်း သွားလေ တော့သည်။ မောင်ကျော်မှာ ဟင်းကနဲသက်ပြင်းချရင်း လှည့်ထွက်လာခဲ့လေတော့သည်။
မောင်ကျော်တစ်ယောက် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်ဆိုက်ထဲမှ စက်ဘီးဖြင့်ထွက်၍အလာ လှသန်းတို့အိမ်ရှေ့အရောက် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ရှေ့ရေတိုင်ကီတွင် ညိုညိုရေချိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ မောင်ကျော်စက် ဘီးပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်။ မောင်ကျော်မှာအရင်ထဲက ညိုညိုကိုတွေ့ရင် သဘောကျစွာဖြင့် ငမ်းနေတတ်သည်။ ပြီးတော့ သူသဘောကျနေသော ညိုညိုကို ဦးအေးမောင်က ပက်ပက်စက်စက် လိုးနေတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ မောင်ကျော်သွေးသားတွေ ညိုညိုနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါက်ကွဲခဲ့ရသည်။ အခုတော့ လှသန်းဆိုက်ထဲတွင်ရှိ၍ အိမ်တွင် ညိုညိုတစ်ယောက် ထဲသာရှိကြောင်း မောင်ကျော်အတတ်သိသည်။ မောင်ကျော်စက်ဘီးကို ဒေါက်ထောက်လိုက် သည်။ မဆိုသလောက် အသံမြည်သွားသော အသံကြောင့် ညိူညိူလှည့်ကြည့်သည်။
“ ဟာ….. အကိုကျော်…. ဘယ်လဲ ” “ ဒီကိုဘဲလာတာ ” “ အိမ်ထဲဝင်ထိုင်လေ…… ကျမလဲ ပြီးပါပြီ ” ညိုညိုက ရေလဲလုံချည်ကို ရင်လျားရင်းပြောသည်။ မောင်ကျော်က အိမ်ထဲဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်။ ညိုညို၏ တင်းရင်းလှပ အချိုးကျလှသော ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ရင်လျားထားသော ရေလဲထဘီလေးက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ရေများဖြင့် တစ်သားထဲကပ်နေသည်။ မောင်ကျော်ကြည့်နေရင်း အာခေါင်တွေခြောက်လာပြီး အသက်ရှုပြင်းလာ သည်။ ညိုညို နောက်ဖေးဖက်သို့ ဝင်သွားပြီး ရေနွေးခရားနှင့် ပန်းကန်လုံးများ တင်ထားသော လင်ပန်းကို ယူလာပြီး မောင်ကျော်နား လာချသည်။ “ အကိုကျော်…… ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ ” “ ထိုင်ပါဦးဟ…… ဖြည်းဖြည်းပြောတာပေါ့ ” ညိုညိုက သိချင်ဇောဖြင့် မောင်ကျော်၏အနီးတွင် ထိုင်ချလိုက်သည်။ မောင်ကျော်ဘာမှမပြောဘဲ ရေနွေးတစ် ပန်းကန်ငှဲ့၍သောက်နေပြီး သူ၏မျက်လုံးများက ညိုညို့တစ်ကိုယ်လုံးကို စားတော့ဝါးတော့မတတ်ကြည့်၍နေသည်။ ညိုညိုက ခေါင်းလေးငုံ့နေရှာသည်။
ခဏကြာသည်အထိ မောင်ကျော်ထံမှ ဘာစကားသံမှထွက်မလာတော့ ညိုညို ငုံ့ထားသောမျက်နှာလေးကိုမော့၍ မောင်ကျော့်ထံ ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက်မှာပင် မောင်ကျော်က သူမ၏ရှေ့သို့ ဗြုံးကနဲတိုးကပ်လိုက်ပြီး ညိုညိုကို အတင်းဖက်ကာ နမ်းတော့သည်။ “ အို…….အို……မလုပ်နဲ့ အစ်ကိုကျော်……..အ….အ….မလုပ်နဲ့ ” နမ်းရုံသာမဟုတ်။ ရင်လျားထားသော ထဘီကိုပါ ဖြတ်ကနဲဖြုတ်ချပြီး မောင်ကျော်၏လက်က ညိုညို၏ နုနယ်လှသော နို့နှစ်လုံးကို အတင်းဆုပ်နယ်နေသည်။ မောင်ကျော်၏ လက်တစ်ဖက်က ညိုညို၏နောက်ကျောကို သိုင်းဖက်ထားတော့ ညိုညိုမှာဘယ်လိုမှ ရုန်း၍မရဘဲဖြစ်နေသည်။
“ တော်ပါတော့ အကိုကျော်….. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ” ညိုညို၏အသံက ထိမ်းပြောပေမဲ့ တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေကြောင်း သိသာလှသည်။ မောင်ကျော်၏ မျက်နှာက သူမ၏ မျက်နှာမှသည် အောက်ဖက်သို့ နိမ့်ဆင်းသွားပြီ။ လက်တစ်ဖက် ညိုညို၏ ကိုယ်ကိုမလွှတ်ဘဲ နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပြစ်သည်။ “ အ…..အို….ပြွတ်…ပလပ်…..ပြွတ်……ပလပ်…..ပြွတ်……ပြွတ်……အိုး…..အိုး ” နို့နှစ်လုံး၏ နို့သီးခေါင်းတွေကိုပါ လျှာဖြင့်ထိုးမွှေ ပွတ်သပ်နေလေတော့ တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်လုံးတွေ စင်းစင်းကျသွားပြီး မောင်ကျော်၏ မျက်နှာကြီးကလဲ သူမ၏ ရင်ဘတ်ကို ဖိဖိနေလေတော့ ညိုညို၏လက်တစ်ဖက်က နောက်သို့ကျားကန်၍ ထောက်ထားရသည်။
ညိုညို မဖွင့်ချင်တော့သော သူမ၏မျက်လုံးကို အားယူ၍ ဖြတ်ကနဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ တော်သေးသည်။ သူတို့ရှိနေသည်မှာ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်တဲ့တဲ့မဟုတ်၍ လမ်းမမှ မမြင်နိုင်ချေ။ တဖြေးဖြေး ညိုညိုအသားလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင်မှ မောင်ကျော်က သူမ၏နို့တွေကို လွှတ်ပေး လိုက်ရုံမက သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ညိုညို မျက်လုံးကိုအားယူ၍ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ “ ဘယ်….. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အကိုကျော်ရယ်…… ” အသံက နွမ်းလျမောဟိုက်၍ နေသည်။ “ ဟိုနေ့က နင်နဲ့ဦးအေးမောင်ကို တွေ့ပြီးထဲက နင့်ကိုငါလုပ်ချင်နေတာ… ” “ အို… ” ညိုညိုမှာ မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားပြီး ခေါင်းငုံသွားသည်။ ပြီးမှ ညိုညို၏ မျက်နှာလေးက ပြန်၍မော့လာပြီး………… “ ဒါများ အကိုကျော်ကလဲ….. အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ……. ” ပြောလဲပြော ဗြုန်းကနဲထ၍ ထဘီကို စွန်တောင်စွဲကာ အိမ်အတွင်းထဲ ပြေးဝင်သွားတော့ မောင်ကျော်က လဲ ဝုန်းကနဲထကာနောက်မှ ပြေးလိုက်သွားသည်။
အတွင်းခန်းထဲအရောက် ညိုညိုကို မှီသွားပြီး နောက်ကနေ လှမ်းဖက်လိုက်သည်။ ညိုညိုအားလွန်သွားပြီး လက်ထဲမှ ထဘီကိုလွှတ်ချကာ သူမရှေ့မှ အိမ်နံရံကို လက်ထောက် ၍ အားပြုလိုက်ရသည်။ ညိုညိုမှာ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် ကုန်းပေးလိုက်သည့်ပုံစံဖြစ်သွားသည်။ သူမခါးကို နောက်မှဖက် လျှက်သားဖြစ်နေသော မောင်ကျော်က သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး အဆင့်သင့်တောင်မတ် နေသော သူ့လီးကြီးကို သူမ၏နောက်သို့စူထွက်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားသို့ တေ့ကာဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“ ပြွတ်…..ပလွတ်…..အား…..အမလေး….သေပါပြီ ” ညိုညို၏ ခါးလေး ကုန်ထ၍လာသည်။ မောင်ကျော်ကလီးတဆုံး ဝင်သွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ညိုညို၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်၍ တလစပ်လိုးဆောင့်သည်။ “ ပြွတ်….ပြွတ်….အား…..အ…နာတယ်….နာတယ်….ပြွတ်……ပြွတ်……စွပ်…..စွပ်….အား…..အား ” ဆက်တိုက်ဆောင့်နေရင်း မောင်ကျော်က သူမ၏ခါးပေါ်မှ သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ဖြုတ်ယူကာ ညိုညို၏ နို့များဆီသို့ လှမ်းလိုက်ပြီး တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ဆုပ်နယ်ပေးကာ ဆောင့်သည်။ “ ပြွတ်…. ပြွတ်…..စွပ်…..စွပ်….အ….အင့်…..အ……အင့်… ” ခဏအတွင်း ညိုညိုနာသည်ဟု မအော်တော့ပေ။ စောက်ခေါင်းထဲတွင်လည်း စိုရွှဲစေးထန်း၍ လာသည်။ “ ပြွတ်…. ပြွတ်…..စွပ်…..စွပ်…အ….အင်း….အင်း……ညိုညို နာသေးလား….လုပ်….လုပ်….လုပ်မှာလုပ် အစ်ကိုကျော်….. ” ဟူ၍ သူမ၏ လက်ကလေးတစ်ဖက်က နောက်ပြန်လှမ်းကာ မောင်ကျော်၏ တင်ပါးလေးကို လှမ်း၍ ပုတ်ရင်း ပြောလိုက်လေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။